1988 – Year – Channel Myanmar
Police Story2(1988) Police Story ဆိုတာနဲ႕ မင္းသားၾကီး ဂ်က္ကီခ်န္းဇာတ္ကားေတြမွန္း သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ Police Story နာမည္နဲ႕ ဂ်က္ကီခ်န္းဇာတ္ကား ၆ ကားထြက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္သြားပါ့မယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့.... ပထမဇာတ္ကား Police Story 1 နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ ပထမဇာတ္ကားက သရုပ္ေဆာင္ေတြပါဝင္ထားျပီး ဇာတ္လမ္းကေတာ့ အသစ္ပါ။ IMDb rating (7.2/10) ရရွိထားပါတယ္။ Encoded By : XCode
Dragons Forever (1988) ဂ်က္ကီခ်န္း...ဟုတ္ခ်င္းေပါင္...ေဘာလံုးမင္းသား..စတဲ့ကေလးဘဝရဲ႕ သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ ကြန္ဖူးသံုးေဖာ္ရဲ႕ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ။Action, Comedy, Romance ဇာတ္ကားျဖစ္လို႕ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးခံစားၾကည့္ရႈရမွာပါ။ခုခ်ိန္မွာ အနားယူသြားၿပီျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းသားႀကီးေတြရဲ႕ ငယ္မူငယ္ေသြးအျပည့္နဲ႔ ဇာတ္ကားေလးကိုတစ္ဖန္ျပန္လည္ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။IMDb Rating (7.3) အထိ ရရွိထားတာေၾကာင့္ ဂ်က္ကီခ်န္းပရိတ္သတ္ေတြလက္လြတ္မခံသင့္တဲ့ဇာတ္ကားပါ။ File size…(999 MB) and (500 MB) Quality….Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration….01:42:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Cindy Honey
Child’s Play (1988) အမေတစ်ယောက်က သူရဲ့သားလေးမွေးနေ့မှာအရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးChucky ဆိုတာဖြစ်လာတော့တာပါပဲ... သရဲကားကြိုက်သူတွေအတွက် ဒီအရုပ်သရဲကားလေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး... File Size : (808 MB) and (253 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 27min Format : Mp4 Genre :Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Pyay Hlwan Aye Encode by Moe Myint Lwin
Rain Man (1988) Rain Man Rain Man ဆိုတာနဲ႔ ရုပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ခတ္ထက္ထက္ လူငယ္တစ္ေယာက္နဲ႔ Autistic ျဖစ္ေနတဲ့ သက္လတ္ပိုင္းလူတစ္ေယာက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုပဲကြ်န္ေတာ့္ မ်က္စိထဲ ေျပးျမင္မိပါတယ္။ ဒီကားက 1988 ခုနွစ္မွာထြက္ခဲ့တာပါ။ အခုအခ်ိန္နဲ႔ဆို ဇတ္ကားေတထြက္ခဲ့တာ ၃၁ ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဝင္ေငြပိုင္းအရ ၂၅ Million ရင္းၿပီး Worldwide ၃၅၄ အထိျပန္ရခဲ့ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပးေျပး ေဖာရက္စ့္ ဆိုတဲ့ Tom Hanks ကားထြက္လာမွပဲ ထိပ္ကေန ေအာက္ဆင္းေပးရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဇတ္ကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ (1988 ) မွာတုန္းက Rank 1 ခ်ိတ္ခဲ့တဲ့ကားပါ။ Run Time က 133 Mins ရွိၿပီးေတာ့ Tom Cruise နဲ႔ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက Greatest Actor ေတြထဲကတစ္ေယာက္ လို႔ေျပာၾကတဲ့ မင္းသားႀကီး Dustin ...
[18+] Two Moon Junction (1988) Two Moon Junction (1988) တောင်ပိုင်းရဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ကြီးပါတဲ့ မိသားစုတစ်ခုက Aprilဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအချိုးအကွေ့ကတော့ ဘွဲ့ရပြီး မကြာခင် ဆောင်တော့မယ့် သူ့မင်္ဂလာဆောင်ရက်ကလေး မတိုင်ခင်မှာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ထရပ်ကားတစ်စီးပေါ်မှာ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ပဲ အမြဲအတူရှိနေတတ်တဲ့ လေလွင့်လူတစ်ယောက် သူ့ဘဝထဲဝင်လာခြင်းပါပဲ။ ဆရာကြီးပီမိုးနင်း မိန်းမစိတ်ကျမ်းထဲထည့်ရေးဖူးသလို မိန်းမစိတ်ဟာ ဆန်းပါတယ်။ သူုပြခဲ့တဲ့ ဥပမာဆိုရင်တော့.. "မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ပုံပျက်ပန်းပျက်ရုပ်ဆိုးပြီး ဗလကောင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းအမြင်မှာ အလိုလိုချစ်သွားပြီး အနီးကပ်မှ သူ့ယောကျာ်း မျက်နှာဒဏ်ရာရလာတာမှန်း သိရတော့ စိတ်မပါတော့တာမျိုုးပါ"။ အရာရာရွှေအတိကျပြီးခဲ့တဲ့ အနာဂတ်ရယ် ဆန္ဒအလိုလိုက်မှုတွေရယ် ကြားမှာ ဂုဏ်သရေရှိပညာတတ် Aprilဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကလေကချေ အရိုင်းအစိုင်းတစ်ကောင်ကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကတော့ တကယ့်ကို နားလည်ရခက်ခက်ပါပဲ။ မိန်းမဆိုတဲ့ ကျမ်းကြီးကို လူအတော်များများကတော့ အနှေးနဲ့အမြန်လေ့လာရမှာပါပဲ...ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ နားလည်ရခက်မယ့်မိန်းမစိတ်အကြောင်း လေ့လာရာမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်အကူုဖြစ်စေမှာပါ ထုံးစံအတိုင်း ပညာယူရင်း မင်းသမီးချောလေး SHEIRLYN FENNရဲ့ တစ်ကြောင်းမျဉ်းအလှတရားပေါင်းများစွာကို တဝကြီးတွေ့ရမှာပါ... ၁၈+အခန်းပေါင်းများစွာပါသဖြင့် မိသားစုနှင့်အတူမကြည့်သင့်ပါ.... File Size : (900 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:44:00 Genre ...
[18+] Two Moon Junction (1988)
Cinema Paradiso (1988) Cinema Paradiso (1988)IMDb - 8.5/10_____Rotten - 89%Won 1 Oscar. Another 24 wins & 31 nominations1988ကဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ဆုပေါင်းများစွာကိုလည်း ရရှိထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့ ရုပ်ရှင်ကိုအရမ်းရူးသွပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းရိုက်ထားတာပါ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ကတော့ အဲလ်ဖရက်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပရိုဂျက်တာထိုးတဲ့သူနဲ့ ဆာလဗာတိုဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကို ဘဝလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကောင်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှာ ရောမမြို့က နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဟာ အဲလ်ဖရက်ဒိုဆိုတဲ့သူဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြားပြီးနောက် နောက်ကြောင်းပြန်ရာကနေစပါတယ် ဒီနောက်ကြောင်းပြန်ရာကနေပဲ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝ အဖြစ်အပျက်များက တိုတို ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဖြစ်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကို ရိုက်ကူးထားတာပါ အဲဖရက်ဒိုက တိုတို ခေါ် ဆာလဗာတိုကို အစပိုင်းမှာ အန္တရယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကောင်လေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို နားလည်လာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ နေ့နေ့ညည ပရိုဂျက်တာခန်းထဲမှာ ပရိုဂျက်တာထိုးတဲ့အလုပ်ကို သင်ပေးရင်းနဲ့ ကောင်လေးကို သားအရင်းတစ်ယောက်လို သံယောဇဉ်တွယ်မိသွားသလို တိုတို ကလည်း အဲလ်ဖရက်ဒိုကို ဖခင်တစ်ယောက်လို ချစ်ခင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် နှလုံးသား အဟာရ ဖြည့်ပေးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခု ဖြစ်သလို ဘ၀ မှာ မသေခင် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်... ရုပ်ရှင် ရုံတင်တဲ့ ခုနှစ် ကတော့ ၁၉၈၈ ခု နှစ်ဖြစ်ပြီး ယခု ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ တောင် ပြည့်တော့မှာပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ...
Grave of the Fireflies (1988) Grave of the Fireflies (1988)ဟာဆိုရင်ဖြင့်best animation movie of all timeထဲကတစ်ကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီး.IMDB.Rating အားဖြင့်လည်းအံသြစရာကောင်းလောက်အောင်8.5ထိရရှိထားတဲ့animeဖြစ်လို့ကြည့်ဖစ်အောင်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ....အညွှန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့....ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဂျပန်နိုင်ငံလည်းနေရာအနှံ့ဗုံးကျဲခံရလို့...ထွက်ပြေးကြရ-ဗုံးကျင်းတွေခိုကြရတဲ့အချိန်မှာ.....ဆဲတိုနဲ့ဆဲဆု တို့မောင်နှမ နဲ့သူတို့အမေလည်း ဗုံးခိုကြရရင်း..သူတို့အမေသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်...အဖေကလည်းတိုက်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်..အဆက်အသွယ်ကလည်းမရဖြစ်နေပြန်တော့..ခိုကိုးရာမဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းအမေ့ညီမ တစ်ဝမ်းကွဲ အဒေါ်အိမ်ကိုမှီခိုဖို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်..ရောက်ခါစကတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆီကပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေမျက်နှာကြောင့်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူဖြစ်ပေမယ့်..အားလုံးကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ညိုငြင်စပြုလာပါတော့တယ်..ကြံခိုင်တဲ့အကိုဖြစ်ဆဲတို က အပြောအဆိုမခံချင်တာနဲ့မောင်နှမလေးနှစ်ယောက်အမေချန်ထားခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့လမ်းဘေးနေရာ တစ်ခုမှာ စားသောက်ခဲ့ကြတယ်..ညမှောင်လာတဲ့အခါ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေဖမ်းပြီးအရင်ကမိသားစု စုံစုံလင်လင်ရှိချိန်တွေပြန်စဉ်းစားကြတယ်..တဖြည်းဖြည်းနဲ့စားစရာတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ....သူတို့ရဲ့အဖေနဲ့ရော ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်မှာလား..ဒီကားလေးကိုဂျပန်လို အဓိပ္ပါယ်ဆိုရင်"ပိုးစုန်းကြူးတို့ရဲ့ ဝိဉာဉ်" လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်..ဒီရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကရော ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတာအပြည့်အဝဆက်သိချင်ရင်တော့ ဒီကားလေးကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဆင်းရဲမွဲတေပုံကနေခေတ်မှီတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစိတ်အင်အားတွေကတွန်းပို့ပေးခဲ့လည်းဆိုတာဒီဇာတ်ကားလေးက သရုပ်ဖေါ်ပြပေးနေသလို..သနားစို့နင့်မှုတွေနဲ့တကွ..လောကဒဏ်ကိုကြံကြံခိုင်တွန်းလှန်စေရဲမဲ့သတ္တိတွေ..စစ်အတွင်းမှာသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အကိုတယောက်ကသူ့ညီမလေးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတွေကိုပြည့်ပြည့်၀၀ဖေါ်ကျူးထားတဲ့ Best Animation Movie Of All Timeသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါခံစားမိလာပြီး..မျက်ရည်ကျတဲ့အထိပါပဲ...CM Fan တွေလည်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး--------------------------------------------------------------------------Grave of the Fireflies (1988)ဟာဆိုရင္ျဖင့္best animation movie of all timeထဲကတစ္ကားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရျပီး.IMDB.Rating အားျဖင့္လည္းအံႀသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္8.5ထိရရွိထားတဲ့animeျဖစ္လို႔ႀကည့္ဖစ္ေအာင္ႀကည့္ႀကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ....အညႊန္းေပးရမယ္ဆုိရင္ေတာ႕....ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးၿဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလည္းေနရာအနွံ႕ဗံုးက်ဲခံရလို႕...ထြက္ေၿပးၾကရ-ဗံုးက်င္းေတြခိုၾကရတဲ႔အခ်ိန္မွာ.....ဆဲတိုနဲ႔ဆဲဆု တို႕ေမာင္ႏွမ နဲ႕သူတို႕အေမလည္း ဗံုးခိုၾကရရင္း..သူတို႕အေမေသဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္...အေဖကလည္းတိုက္ပြဲမွာတိုက္ခိုက္ေနရတဲ႕အတြက္..အဆက္အသြယ္ကလည္းမရၿဖစ္ေနၿပန္ေတာ႕..ခိုကိုးရာမဲ႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္လည္းအေမ႔ညီမ တစ္၀မ္းကြဲ အေဒၚအိမ္ကိုမွီခိုဖို႕ေရာက္လာခဲ႕ၾကပါတယ္..ေရာက္ခါစကေတာ႕ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ဆီကပါလာတဲ႕အစားအေသာက္ေတြမ်က္ႏွာေၾကာင္႔ၾကည္ၾကည္ၿဖဴၿဖဴၿဖစ္ေပမယ္႕..အားလံုးကုန္သြားတဲ႔အခါမွာေတာ႕ ...
Mr. Vampire4( 1988 ) တရုတ္ခုန္ဆြ သရဲကားေတြဆုိၿပီးနာမည္ၾကီးခဲ႔တဲ႔1988 မွာ ထြက္ရွိခဲ႔တဲ႔ Mr. Vampire ရဲ႕ ေလးကားေၿမာက္ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္..1 ,2,3,4,5 ထြက္ရွိခဲ႔ေပမယ္႔ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ တစ္ကားနဲ႕တစ္ကားဆက္စပ္မွုမရွိသလိုတစ္ကားလာတိုင္း အဓိကသရုပ္ေဆာင္ကလြဲရင္က်န္တာေတြေၿပာင္းသြားတာမို႕ ဘယ္ေနရာကေဖာက္တင္တင္..ေဖာက္ၿပီးၾကည္႔ၾကည္႕ အရသာလံုး၀ပ်က္မွာေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး..ဒါေၾကာင္႔မို႕Mr Vampire4ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္…ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း – ဟိုဘက္အိမ္မွာရွိတဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ႕အိမ္နီးခ်င္းေမွာ္ဆရာတို႕ဟာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးလံုး၀မတည္႔ၾကပါဘူး..ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွာေတာ႔ တပည္႔မေလးတစ္ဦးရွိၿပီးေမွာ္ဆရာမွာေတာ႔ တပည္႔တစ္ဦးရွိပါတယ္..ဆရာ၂ေယာက္ကလံုး၀မတည္႔ေပမယ္႔ ေမွာ္ဆရာရဲ႕တပည္႕ကေတာ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕တပည္႔မေလးၿဖစ္တဲ႔ ခ်င္းခ်င္းကို သေဘာက်ေနပါတယ္..အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ၾကဆိုင္ၾက..နိပ္ကြပ္ၾကနဲ႕ဟာသေလးေတြေႏွာၿပီး ရိုက္ကူးထားပါတယ္..ဘယ္ေလာက္ပဲမတည္႔ပါေစ..အႏၱရာယ္ကိုရင္ဆိုင္လာတဲ႕အခါမွာေတာ႔အတူ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကပါတယ္..ကေလးဘ၀တုန္းကႏွစ္ၿခိဳက္စြာၾကည္႔ခဲ႔ရတဲ႔ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ၿပန္ၾကည္႕ရမွာမို႕သေဘာက်မယ္လို႔ထင္ပါတယ္..မၾကည္႕ရေသးတဲ႔သူေတြလည္းၾကည္႔ပါ..ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးအပ်င္းေၿပၾကည္႔ေကာင္းသလိုအရမ္းလည္းရယ္ရတဲ႔ဇာတ္ကားေလးေတြပါ..
Mr. Vampire4( 1988 )
Rambo III (1988) [Unicode]ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အငြိမ်းစားယူနေတဲ့ Rambo တစ်ယောက် သူ့ရဲ့အဖေလိုရင်းနှီးတဲ့ Colonel Trautman သူနဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လာခေါ်ပါတယ်။ အနားယူဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ငြင်းလိုက်ပေမယ့် Trautman တစ်ယောက်ရန်သူလက်ထဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Rambo ဟာသွားကယ်ဖို့ လိုက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကာ Trautman ကိုကယ်တင်ရင်း ဒေသခံတွေအတွက်ပါကူညီပေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Action,Adventure,Dramaဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။[Zawgyi]ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ အျငိမ္းစားယူေနတဲ့ Rambo တစ္ေယာက္ သူ႕ရဲ႕အေဖလုိရင္းႏွီးတဲ့ Colonel Trautman သူနဲ႔အတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ လာေခၚပါတယ္။ အနားယူဖုိ႔စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားလုိ႔ ျငင္းလုိက္ေပမယ့္ Trautman တစ္ေယာက္ရန္သူလက္ထဲက်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ Rambo ဟာသြားကယ္ဖုိ႔ လုိက္သြားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္ျပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိကာ Trautman ကုိကယ္တင္ရင္း ေဒသခံေတြအတြက္ပါကူညီေပးတာကုိေတြ႕ရမွာပါ။ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ Action,Adventure,Dramaဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။File size…(950MB) and (410MB) Quality…BR-Rip 1080p Format…mp4 Duration….01:41:37 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by d3monEncoded by Naing Aung Latt
Big (1988) Big (1988)IMDb (7.3)......Rotten Tomatoes (93%)၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ မင်းသားကြီး Tom Hanks ဟာ အသက် ၃၂ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ မင်းသားကြီးလည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ Big ဟာ Tom Hanks ကို အခုလို စူပါမင်းသားဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ဇာတ်လမ်းက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ကျနော်တို့ ကလေး ဘဝတုန်းက လူတိုင်းလိုလို ခံစားဖူးခဲ့ကြတဲ့ "လူကြီးဖြစ်ချင်တယ်" ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေး အပေါ်မှာ ရေးဖွဲ့ထားတယ်။ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် ကလေးဘဝမှာ မနေချင်တော့ဘဲ လူကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းလေးပြည့် သွားပြီး နေ့ခြင်းညခြင်းပဲ အသက် ၃၀ အရွယ် လူကြီးကြီး ဖြစ်လာတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကသာ လူကြီး ဖြစ်လာပေမယ့် စိတ်ကတော့ ၁၃ နှစ်ပဲရှိသေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူကြီးဘဝ ဟာ ထင်ထားသလို မဟုတ်ပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းတွေ့လာ တော့ ...
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) IMDb - 7.6/10_____Rotten - 88% ကဲ CM ပရိတ်သတ် ကြီးကို အတော မသတ်အောင် ရယ်မောရမဲ့ ရဲဟာသ ကားလေး တစ်ကား တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော် တို့ ငယ်ငယ် က ခေါင်းဖြူ အဖိုးကြီး ကားဆိုပြီး ခွေဆိုင် တွေမှာ ငှားကြည့် ပြီးခွီခဲ့ရတာတွေကို မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း တလွဲတွေ လုပ်ပြီး ရုပ်တည် ကြီးနဲ့ လည်း ဖြီးတက်သေးတဲ့ ကြွားရတာလည်း ဝါသနာပါတဲ့ ရဲဋ္ဌာနက ဗိုလ်လေး ဖရန့်ဒရက်ဘင်က ကျွန်တော့် ကလေးဘဝမှာ ကျေနပ် နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ ထဲက တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီ Naked Gun က နဂို 1982 က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Police Squad ...
Channel Myanmar © 2022 All rights reserved ©2017 All rights reserved Disclaimer: ChannelMyanmar.org is not in anyway associated with Gostream.is, Onlinemovies, Fmovies, Xmovies8, Putlocker sites. We do not host any videos on Channelmyanmar.org itself. Channelmyanmar.org is absolutely legal and contains only links to other third party websites like Youtube, Uptobox, Mediafire, Google, Picasaweb, Dailymotion, Openload, VK.com and many more which actually host videos. Channelmyanmar.org is not responsible for the compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or linked hosting websites. Channelmyanmar.org only and only provides links to third party video hosting sites which videos are uploaded by third party users. Channelmyanmar.org in no way affiliated with them nor intend to do that.